एजेन्सी – न्युजिल्यान्डले आइसिसी टि२० विश्वकप २०२१ मा भारतमाथि सानदार जित हात पारेको छ । सुपर १२ को समूह २ मा रहेको न्युजिल्यान्डले भारतलाई ८ विकेटले हराउँदै सेमिफाइनल सम्भावना बलियो बनाएको छ । लगातार दोस्रो लज्जास्पद हारसँगै उपाधिको दाबेदार भारत भने समूह चरणबाटै बाहिरिने सम्भावना उच्च बढेको छ । जितको लागि १ सय ११ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्डले १४।३ ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै पूरा गर ... read more...
इंग्लिस प्रिमियर लिगमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले टोटेनहमलाई ३-० गोलले पराजित गरेको छ। शनिबार राति भएको खेलमा युनाइटेडका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एक गोल गर्दा अर्को गोलका लागि पास मिलाइदिए। रोनाल्डोले ३९ मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेजको पासमा गोल गरेका थिए। ६४ मिनेटमा रोनाल्डोको पासमा काभानीले टिमको अग्रता दोब्बर पारे। युनाइटेडका लगि रास्फोर्डले ८६ मिनेटमा तेस्रो गोल गरेका थिए। अर्को खेलमा लिभर ... read more...
नेपाली राष्ट्रिय यू-२३ फुटबल टोलीले एएफसी यू-२३ एसियन कप छनोट अन्तर्गत समूह बीको दोस्रो खेलमा आयोजक ताजिकिस्तानसँग खेल्दैछ । खेल नेपाली समयानुसार साँझ ७:४५ बजे हुनेछ । पहिलो खेलमा इरानविरुद्ध ४-० को हार बेहोरेसँगै नेपालको अर्को चरणमा पुग्ने सम्भावना पातलिएको छ । उक्त खेलमा पहिलो हाफ गोलरहित रहेपनि नेपाली डिफेन्स दोस्रो हाफमा सम्हालिन नसक्दा पराजित भएको थियो । ताजिकिस्तानले पहिलो खेलमा लेबनानलाई १- ... read more...
काठमाडौं, कात्तिक १० । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका खेलाडीलाई वितरण गर्ने गरी कराते खेलाडी सुमन तिमल्सिनाले कराते र तेक्वान्दो पोेशाक सहयोग गरेकाछन् । खेलाडी तिमल्सिनाले दुई खेल संस्थालाई सहयोग स्वरुप करिब ६० हजार मुल्य बराबरको कराते र तेक्वान्दो पोशाक वितरण गरेका हुन् । नेपाल गोजुरियो कराते डो संघलाई २४ थान गी (कराते पोशाक) तथा कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङलाई १६ थान डोबोक (तेक्वान्दो पोशाक) सुमनले व्यक् ... read more...
नुवाकोट । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकास्थित सुर्यचौरमा वैशाख १ गते रेस्लिङको महाभिडन्त हुने भएको छ । आरडब्लु समर स्लाईम अन्तर्गत नयाँ वर्ष २०७८ को अवसरमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिता नेपाल रिङ रेसलिङ संघको आयोजना र शिवपुरी गाउँपालिकाको सहआयोजना हुन लागेको हो । नयाँ वर्षका दिन दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुने भिडन्तमा हेभी वेट अन्तर्गत राष्ट्रिय रिङ रेस्लिङ विजेता नुवाकोटे टाइगर र चट्टान भिडने छन् । त्य ... read more...
भक्तपुर । नेपाल तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुमेरु ग्रुपका अध्यक्ष भरत महर्जनले भक्तपुरका १६ तेक्वान्दो डोजाङलाई व्यक्तिगत रुपमा खेल सामाग्री सहयोग स्वरुप प्रदान गरेका छन् । प्रत्येक डोजाङलाई एक सेट चेस्ट प्याड, एक सेट हेड गार्ड, एक सेट ग्रोइन गार्ड र दुई थान किक प्याड प्रदान गरे । प्रत्येक डोजाङलाई ११ हजार २ सयका दरले जम्मा १ लाख ७९ हजार २ सय रुपैयाँको सामाग्री प्रदान गरिएको हो । महर्जन ... read more...
काठमाडौं । जारी वीर गणेशमान सिंह स्मृति चौथो राष्ट्रिय खुला किक बक्सिङ प्रतियोगिताको पुरुष ६० केजीमा शुक्रबार एपीएफका मंगलप्रसाद थारु फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उसुमा रजत जितेका मंगलले आयोजक ललितपुरका सन्तोष मगरलाई पराजित गरे । सोही स्पर्धामा नेसनल मुवाँथाईका अब्राहम राई, बक्समान्डुका मनीषकुमार भुजेल र नेपाल आर्मीका कमल आचार्य पनि आ-आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउँ ... read more...
काठमाडौं । नेपाल पावर लिफ्टिङ संघको आयोजनामा हुने रुप कार्की स्मृति प्रथम नेपाल्स स्ट्रोङगेष्ट राष्ट्रव्यापी पावर लिफ्टिङ प्रतियोगिताको तयारी पूरा भएको आयोजकले जानकारी दिएको छ । आयोजक समितिका सचिव सुरेश सुवेदीका अनुसार प्रतियोगिता त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कभर्डहलमा शनिबार हुँदैछ । प्रतियोगितामा ७३ पुरुष र २८ महिला गरी जम्मा १ सय १ खेलाडीहरुको सहभागिता रहने छ । शुक्रबार खेलाडीको ... read more...
काठमाडौं । आयोजक दिलिप स्मृति प्रतिष्ठानले चौथो दिलिप स्मृति उपत्यका व्यापी तेक्वान्दो प्रतियोगिताको पहिलो दिन शुक्रबार ४ स्वर्ण जितेको छ । पुरुष ५८ केजीमा शिव श्रेष्ठ र ३० केजीमा किरण तामाङ तथा महिला १९ केजीमा कृपा गौतम र ३० केजीमा रोजिना तामाङले आयोजकलाई स्वर्ण दिलाए । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सेमी कभर्डहलमा भइरहेको प्रतियोगितामा विश्वनिकेतनले २ स्वर्ण जित्यो । महिला ५६ केजीमा ... read more...
काठमाडौं । दिलिप स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा चौथो दिलिप स्मृति उपत्यका व्यापी तेक्वान्दो प्रतियोगिता आजदेखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न डोजाङ र स्कुल गरी १९ टिमका १ सय २८ पुरुष र ६२ महिला गरी जम्मा १ सय ९० खेलाडीको सहभागिता रहने प्रतिष्ठानका अध्यक्ष राजेन्द्र खत्रीले जनाए । पुरुषमा ११ र महिलामा ९ गरी २० स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने छ । शीर्ष तीन स्थान हात पार्ने टिमलाई क्रमशः १५ हजार, १० ह ... read more...
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला तेक्वान्दो संघको पहलमा काठमाडौंमा रहेका विभिन्न ४५ तेक्वान्दो डोजाङलाई बिहीबार खेल सामाग्री वितरण गरिएको छ । नेपाल तेक्वान्दो संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुमेरु ग्रुपका अध्यक्ष भरत महर्जनको सहयोगमा डोजाङहरुलाई खेल सामाग्री वितरण गरिएको हो । प्रत्येक डोजाङलाई एक सेट चेस्ट प्याड, एक सेट हेड गार्ड, एक सेट ग्रोइन गार्ड र दुई थान किक प्याड गरी ११ हजार २ सय मुल्य बराबरको सामाग् ... read more...
काठमाडौं । आकर्षक नगद पुरस्कार राशीको वीर गणेशमान सिंह स्मृति चौथो राष्ट्रिय खुला किक बक्सिङ प्रतियोगिता बिहीबारदेखि हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय खेलकुद विभाग र ललितपुर जिल्ला किक बक्सिङ संघको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको प्रतियोगिताको कुल नगद पुरस्कार राशी ९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वकोषाध्यक्ष समेत रहेका विभागका सचिव एवं प्रतियोगिता संयोजक मिनकृष्ण मह ... read more...
काठमाडौं । मुलपानी तेक्वान्दो डोजाङका आयुश ढुंगेलले काठमाडौं जिल्लास्तरीय तेक्वान्दो छनोट प्रतियोगितामा शुक्रबार स्वर्ण जितेका छन् । उनले पुरुष १४-१८ वर्ष उमेरसमूहमा स्वर्ण जितेका हुन् । उक्त स्पर्धाको महिलामा स्युचाटार तेक्वान्दो डोजाङकी मोनिका रम्तेल पहिलो भइन् । पेयर पुम्सेको १४-१८ वर्षमा चन्द्रसूर्य तेक्वान्दो डोजाङका हिमाला अधिकारी र योग्य राई विजेता बने । सोही उमेर समूहको टिममा स्युचाटारका म ... read more...
नेपालले उचाल्यो 'थ्रि नेसन्स कप' को उपाधि
२०७७ चैत्र १६ गते १९:५१
काठमाडौं । नेपालको दशरथ रंगशालामा भएको 'थ्रि नेसन्स कप' को उपाधि नेपालले उचालेको छ । सोमबार भएको फाइनल खेलमा बंगलादेशलाई २-१ गोलले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको हो । सन् २०१६ मा एएफसी सोलिडारिटी कपको उपाधि जितेपछि कुनै उपाधि जित्न नसकेको नेपालले पाँच बर्षपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा जित निकालेको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को आयोजनामा भएको उक्त प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाध ... read more...
काठमाडौं । एन्जल्स स्पोर्ट्स एकेडेमी एन्ड रिक्रिएसन सेन्टर, मनमैजुको आयोजनामा यु-१३ एन्जल्स हार्ट नेसनल स्कुल जुनियर क्रिकेट लिग-२ चैत २७ गतेदेखि हुने भएको छ । प्रतियोगितामा ८ देखि १२ छात्रा टिमको सहभागिता अपेक्षा गरिएको आयोजकका कार्यकारी अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । एन्जल्स हार्ट नेसनल स्कुलको प्रमुख प्रायोजनमा हुन लागेको प्रतियोगिता लिग कम नकआउट आध ... read more...
मौजामा १६ सय ५० मिटरको उचाईमा फुटबल मैदान निर्माण
२०७७ चैत्र १४ गते १८:४४
पोखरा । ठूलाठूला रंगशालाहरु शहर केन्द्रित भईरहेका बेला अबको केहि वर्षपछि शहरी कोलाहलबाट मुक्त ठाउँमा खेलकूदको रौनक बढ्ने र दर्शक पनि आकर्षित हुने विश्वासका साथ पोखरा महानगरपालिकाले १६ सय ५० मिटरको उचाईमा फुटबल मैदान निर्माण थालेको छ । मैदानको शनिबार एक कार्यक्रमबीच शिलान्यास गरिएको हो । पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी र गण्डकी प्रदेशका सांसद विन्दुकुमार थापाले उक्त खेल मैदानको शिलान्यास गरे । ' ... read more...
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा विरेन्द्र नगरमा तेस्रो महिला राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगिता शुक्रबारबाट सुरु भएको छ । प्रतियेगिताको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले उद्घाटन गरे । सो अबसरमा मुख्यमन्त्री शाहीले खेलकुकको महत्वलाई ध्यानमा दिँदै प्रदेश सरकारले निती तथा योजना बनाएको वताए । विशेष अतिथिको रुमपा बोल्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवालले कर् ... read more...
केन्द्रीय डोजोकी रजिता ढुंगेललेलाई स्वर्ण
२०७७ चैत्र १३ गते २१:५७
काठमाडौं । केन्द्रीय डोजोकी रजिता ढुंगेलले चौथो जुनियर खुला कराते तथा किक बक्सिङ प्रतियोगितामा शुक्रबार स्वर्ण जितेकी छन् । नेपाल सितोरियो कराते संघ, छाउनी शाखा डोजोद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको महिला ६० केजीमाथि फाइनलमा रजिताले भक्तपुरकी ननिता श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै स्वर्ण जितेकी हुन् । महिला २० केजीमा एम्सकी सविरा नेपाली, २५ केजीमा वादोकाइकी प्रतिक्षा तामाङ, ३० केजीमा इचङकुकी सन्ध्या महत, ३५ केजी ... read more...
राखेप कर्मचारीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग
२०७७ चैत्र १३ गते २१:५२
काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अन्तर्गत नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान (सान) का निर्देशक स्व. सुदेशकुमार रिमालको परिवारलाई शुक्रबार आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । राखेपमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको फागुन महिनाको तबलबाट प्रति कर्मचारी १.५ प्रतिशत तलब कट्टा गरी हुन आउने २ लाख ९ हजार ३३ रुपैयां छयालीस पैसा स्व. रिमालका परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । राखेप कर्मचारी संघका अध्यक्ष रञ्जन था ... read more...